Mazita evamakurukota makumi matatu nemashanu evashanyi UNWTO iri kukoka sarudzo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mazita evamakurukota makumi matatu nemashanu evashanyi UNWTO iri kukoka sarudzo
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
UNWTO: Kutangazve kwakachengeteka kwekushanya kunogoneka
Parizvino makurukota ezvekushanyirwa munyika idzi makumi matatu neshanu anga akanyarara. Mumwe mushumiri akaudza eTurboNews kubva pachinyorwa: "Nei ndichifanira kuburitsa mutsipa wangu kutanga?" Rudzi rwekufunga urwu runogona kunge rwuri kiyi yekubudirira kune anonyengera UNWTO Secretary-General kukurudzira mhedzisiro yesarudzo yaanoda kukunda.
Heino runyorwa rwenyika makumi matatu neshanu. Nyika dzese dzave kuziviswa nezvechirongwa ichi, uye mhinduro kana zviito zvakamirira.
Yakatangwa neye tenzi pfungwa yekusagadzikana kwezvematongerwo enyika
Tiye Guta reMadrid dyakarongedza peji pane yayo webhusaiti inoyambira vangangove vashanyi kuti varege kuenda kuguta rino uye vanonyora zvese zvinorambidzwa, nguva dzekuvhara nguva, uye zvekumanikidza kuvhara munzvimbo.
Iyo yepamutemo webhusaiti yekushanya kuSpain www.anongon.info inofuratira COVID-19 zvachose, asi iyo Embassy yeUS muMadrid yakatumira zvinotevera:
Nekuda kwe COVID-19 Spanish zvirambidzo zvekufamba, vagari vemuUS havagone kupinda muSpain kunze kwekunge vasangana nezvinodiwa chaizvo kana vatowana mvumo chaiyo kubva kuHurumende yeSpain. Pamusoro pezvo, vagari vemuUS vanofamba kubva kuUnited States kana dzimwe nyika vachada kuratidza yakaipa PCR bvunzo yakatorwa mukati maawa makumi manomwe nemaviri vasati vasvika uye vopedzisa Hodhi Yekudzora Hutano (Ona Kupinda uye Buda Zvinodiwa pazasi).
Chakavanzika che World Tourism Sangano UNWTO kuMadrid musi waZvita 8 akatumira mirairo kumakurukota ezvekushanyirwa munyika makumi matatu nenomwe nhengo dziri kumiririra komiti yepamusoro. Dare iri rinotarisirwa kusangana muMadrid musi wa35 Ndira na18 Ndira kuti vasarudze Secretary General. Zurab ndomumwe wevaviri vakakwikwidza uye zvakaita kuti zvisave nyore kuwana mukwikwidzi. Iye chete mukwikwidzi anokwanisa kuuya muminiti yekupedzisira ndiHE Mai Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa vanobva kuHumambo hweBahrain. Kunyangwe Bahrain yakanyorwa zvisirizvo muchisimbiso chepamutemo chakapihwa neUNWTO.
Dzimwe nyika nhanhatu dzakasarudza vavhoterwa. Nekuda kwekushayikwa kwenguva uye kushamisika kwemapfupi nguva yekupedzisira vafundisi zvikanganiso zvakabvisa 6 dzakatarwa mazita.
Zurab Pololikashvili ndiye anotungamira mukumanikidza uku uko kungave kusinga zivikanwe nedzimwe nyika makumi matatu neshanu dzakabatwa.
Kwemakore maviri, Secretary General akachengeta zvinodiwa nenhengo idzi makumi matatu neshanu zvichiita kuti zvive nyore kuti vazhinji vavo vavhote vachimupikisa. Kune zvisungo zvehupfumi, misangano yakakosha, zvipikirwa zvezvinzvimbo zvakakosha, nyaya dzakataurirana nevashumiri vekunze, pamwe nemavhoti emuchinjikwa, uye nezvimwe zvakawanda nevakuru makumi matatu neshanu.
Secretary General weUNWTO Zurab Pololikashvili akanyengedza nhengo idzi makumi matatu neshanu munaGunyana gore rino kuti vabvume kufambisa sarudzo yeUNWTO kubva muna Chivabvu kusvika munaNdira 35. Munyori Mukuru akataura kuGeorgia kuti aida kubvisa kufamba kusiri madikanwa kwemakurukota enhengo dzedare repamusoro. Kufunga kwacho kwaive nekuda kwekugadzwa kweFITUR - ratidziro yekutengesa vashumiri vazhinji vanowanzoenda kuMadrid. Ichi chiratidzo chebhizimusi chakarongwa muMadrid muna Ndira 2021-18. Zurab aitoziva nezve chirongwa cheFITUR chekumisikidza.
Vhiki chete gare gare, FITUR yakadzoserwa kuna Chivabvu apo Madrid yakapinda mukuvhara. Yakaita kuti Madrid ive isina kuchengetedzeka pakufamba. Panzvimbo pekukurumidza kuendesa musangano wesarudzo kumashure kwawakanga uri, Zurab yave kumanikidza makurukota kuti akwire ndege uye vauye kuMadrid chete nevhoti yaJanuary 18-19. Iye anonyatsoziva kuti izvi hazviitike, uye achakunda sarudzo iyi.
Sekureva kwaZoltan Somogyi, aimbova Executive Director kuWorld Tourism Organisation, chirongwa ichi chinogona kunge chiri chepamutemo, asi chisiri mutsika.
Ko zvakadii nezve kurega Executive Council maMinister avhote zvemagetsi?
Mutsamba yaDecember 8, UNWTO Secretariat yakarairwa kuudza nyika kuti mavhoti emagetsi haachaverenge.
Tsamba yeUNWTO kunhengo dzayo dzeKanzuru yeKanzuruDownload
Hechino chikamu chakakodzera chetsamba:
Zvinoenderana neMutemo 29 weMitemo yeNzira uye nemitemo mirefu nemaitiro anonyorera kusarudzwa pachigaro cheMunyori-Mukuru, chakaburitswa pano pasi peChikamu chechitatu pazasi, Kanzuru ichaita kurudziro yayo kumusangano wega wega nekuvhota kwakavanzika .
Mitemo yeNzira dzeKanzuru yeKutungamira neMitemo Inotungamira yeKufambiswa kwesarudzo neChipupuriro Chibvumirano (chakabatanidzwa kuMitemo yeMabatiro eGeneral Assembly), pamwechete ne
iyo yataurwa pamusoro-mira mirefu mitemo, yakanyorwa nenzira iyo inofungidzira kuti Nhengo Nyika dzivepo mumusangano wega. Zvisinei, mune ino mamiriro epasirese epasi apo mumisangano yemunhu-weKanzuru inoisa chinetso chakakosha uye kuungana kukuru kunoodzwa moyo pasirese, zvave zvakakosha kuongorora nzira dzechinguvana uye dzinoshamisa kuona kuti zvinotora sarudzo dzakakomba kuti mushandirapamwe iro Sangano.
Kuti izvi zviitike, Nhengo dzeKanzuru dzakatorera kuburikidza nekunyarara kuita sarudzo "Maitiro Akakosha anotonga Executive Council panguva ye COVID-19 denda" 2 inoratidza yakasarudzika
Mitemo inodzora kuitiswa kwemasangano eke-mukati uye-e-munhu eDare panguva ye COVID-19 denda nekupa mvumo Sachigaro weKanzuru, nekubvumidzwa kwaSecretary-General, kuita zvikamu zveKanzuru zvakaringana sekubata musangano-wemunhu haubatsiri nekuda kwedenda, uye kuzivisa nhengo dzese nezve sarudzo dzakadai mazuva gumi pamberi pekuvhurwa kwechirongwa.
Nzira dzehunyanzvi dziripo parizvino kuSecretariat hadzibvumidze, zvisinei, kubata chibvumirano chakavanzika pamhepo asi panzvimbo pega mumunhu. Muchokwadi, hapana dare rinodzora rerimwe sangano reUnited Nations system rakabata bhandi rakavanzika pamhepo.
Nekudaro, kunyangwe muchiitiko chemasanganiswa (online uye mu-munhu) musangano weKanzuru, pachinhu pane kurudziro yemunhu akasarudzwa pachigaro cheMunyori-Mukuru, Nhengo dzine kodzero yekuvhota dzinenge dziripo panguva yekukurukurirana. yevamiriri ("musangano unovharira wega") uye panguva yekuvhota pakavanzika ("musangano wakavanzika wega"). Kuti izvi zviitike, vamiriri venhengo dzinovhota dzeKanzuru vanofanirwa kuve nenhengo imwe chete ichavepo mumusangano wega wega uye vakapihwa simba rekukwanisa kuvhota.
Muchidimbu, mumiriri weNhengo yekuvhota yeKanzuru aripo pamusangano wega ("muvhoti"), angave ari mumiriri wake kana nhengo yedare rakasiyana (proxy), anofanira kupihwa mvumo uye kupihwa simba kukanda sarudzo pachinzvimbo chayo.
Sekirariari inoenderera ichirangarira kuti vanoverengeka maNhengo States vakasarudza mamishinari avo kuHumambo hweSpain seVamiririri Vasingaperi kuSangano vane masimba akakwana kuti vavamiririre mumisangano yematare anotonga nekuvavhotera, maererano kuita kwemamwe masangano ehurongwa hweUnited Nations.
Panyaya yekudaidzwa kwevanotaurira zvinoenderana neMitemo Inotungamira yeKufambiswa kwesarudzo neChipupuriro chekuvhota, Sachigaro weKanzuru achagadza vatauri vaviri (2) kubva kunhengo dzeKanzuru idzo nhume dzadzo dzinosanganisira vanopfuura mumwe aripo muMusangano.
Chekupedzisira, kuitira kuvimbisa zvakavanzika zvemusangano zvichiteerana nemirau, kutora chikamu pamhepo hakuzowanikwe panguva yemusangano wakasarudzika wakasarudzika, uyezve, zvinogona kudaro
zvakare inorambidzwa pakavanzika pakavhota.
Vhiki rapfuura, nyika dzese dzakabatika mutsamba yakavhurika naaimbova Secretary General weUNWTO Dr. Taleb Rifai, uye naFrancesco Frangialli, kudaidzira shanduko yezuva resarudzo. Parizvino hapana nyika yakabuda pachena.
World Tourism Network uye mazana enhengo dzayo vakadaidzira decency mune iyo UNWTO Sarudzo Maitiro. Hapana mhinduro yakagamuchirwa neUNWTO.
Tsamba yakatumirwa kuMunyori Mukuru weUnited Nations muNew York nezuro, uye mhinduro yakamirira.
Apa ndipo pakatumirwa tsamba ku:
Executive Council Nhengo
Ministre du Tourisme, de l'artisanat et du travail mhuri
HE VaFuad Naghiyev
Sachigaro weHurumende Tourism Agency
IYE VaZared Rashed Alzayani
Gurukota rezvemaindasitiri uye Zvekutengeserana uye Tourism
HE Mr. Marcelo Álvaro Antônio
HE VaCarlos Jorge Duarte Santos
Gurukota Rezvekushanya nekutakura
HE Mr. Heping Hu
Gurukota rezvetsika uye Tourism
Ministry of Culture uye Tourism yePeople's Republic of China
Ministre du Tourisme et de l'Environnement, muchaji cheDeveloppement yakasimba
Ministre du tourisme et Zvivakwa
HE Dr. Khaled Ahmed El-Enany
Gurukota rezveKushanya uye Zvekare
Ministry for Europe uye Kunze kwenyika, France Gurukota
Direction des entreprises, de l'économie internationale et de la kusimudzira du tourisme (DEEIT)
IYE Mr. Harry Theoharis
HE VaPrahlad Singh Patel
Gurukota reHurumende rezveTsika neKushanyirwa
Ministry of Tourism, Hurumende yeIndia
Gurukota reCultural Heritage, Tourism uye Hemaoko eIslamic Republic yeIran (MCTH)
HE VaDario Franceschini
Gurukota rezvetsika nemagariro
HE VaKazuyoshi Akaba
Gurukota rezveMinda, Zvivakwa, Zvokufambisa uye Tourism
Hon. VaNajib Balala
Munyori wedare remakurukota eVashanyi nemhuka dzesango
Ministry of Tourism neWildlife
Iye Mr. Rimantas Sinkevičius
Gurukota Ministry of Economy uye Innovation
Gurukota rezveMamiriro ekunze, Masango uye Tourism
MAMBO Mai Claudia Eugenia Cornejo Mohme
Gurukota rezvekunze Kutengeserana ne Tourism
HE VaPedro Siza Vieira
Gurukota rezvehupfumi, Portugal
HE VaYangwoo Park
Gurukota retsika, Nhabvu uye Tourism
HE VaVirgil-Daniel Popescu
Ministry of Economy, Energy uye Bhizinesi Nharaunda
Mai Zarina Doguzova
Musoro weFederal Agency for Tourism
Federal Agency Yekushanya kweiyo Russian Federation
VAHUMI VaAh Ahmed bin Aqil Al Khateeb
HE VaAlioune Sarr Gurukota rezveKushanya uye Kutakurwa Kwemhepo
Undersecretary webazi rezvetsika, Tourism uye zvekare
Ministry of Culture, Tourism uye Zvekare
Va Mr. Phiphat Ratchakitprakarn
Gurukota rezveKushanya neMitambo
HE Mr. Mehmet Nuri Ersoy
Gurukota rezveMamiriro ekunze, Tourism uye Indasitiri Yekugamuchira Vaeni
Yakachengetedzwa gastronomy muSychelles Islands
IATA Inokurudzira Nyika Kutevera Nhungamiro yeWHO pa ...
Chii Chinoitika mu Vegas chinofanirwa kuve chakavanzika
American Airlines ichienzaniswa neJet Blue: An Executive ...
Tourism inotyaira hupfumi hweJamaica kubva ...
Mambokadzi Anoda Clive Scott, iyo GM yeSofitel ...
ICAO greenlights Chikumbiro cheQatar chekudzora ...
Israeri Kurambidza Vagari Vasina Kuvharirwa Kubva kune Ruzhinji Ruzhinji ...
Kurambidzwa kwekufamba kurerutsa Chikunguru 5 zvizere ...
Sei COVID Inokanganisa France Kufamba uye Tourism mu2020